"Pep Guardiola Waxa Waajib Ku Ah Inuu Dhabarta Ku Rito Guul-darrada, Waayo Dhinaciisa Ayay Ka Timid" - Rio Ferdinand Oo Weerar Ku Qaaday Tababaraha Man City - Gool24.Net
“Pep Guardiola Waxa Waajib Ku Ah Inuu Dhabarta Ku Rito Guul-darrada, Waayo Dhinaciisa Ayay Ka Timid” – Rio Ferdinand Oo Weerar Ku Qaaday Tababaraha Man City
August 16, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Halyeygii hore ee Manchester United ee Rio Ferdinand ayaa ku canaantay tababare Pep Guardiola qaabkii uu u sameeyey xulashada ciyaartoyda kooxdiisa kulankii Man City ay guul-darradu kasoo gaadhay ee Lyon ay 3-1 kaga reebtay tartanka Champions League.
Manchester City oo ka mid ahayd kooxaha loo saadaalinayey tartanka Champions League ee xili ciyaareedkan ayaa waxay la kulantay guul-darro qadhaadh, waxaaana wareegga siddeedda kusoo garaacday Lyon oo ku karbaashtay 3-1.
Tababare Pep Guardiola ayaa isbeddel ku sameeyey safka kooxdiisa kulankii xalay, waxaanu kaydka dhigay David Silva, Riyad Mahrez, Bernardo Silva iyo Phil Foden, isaga oo kusoo galay shax ka koobnayd 3-5-2, isaga oo yareeyey difaaca isla markaana awoodda saaray khadka dhexe oo haddana shaqayn weyday.
City waxay weyday kubaddii lagu yaqaanay, waxaana ku adkaatay inay baasas qurux badan isku dhiibaan qaybtii hore, waxaana lagu ciqaabay qalad ay difaaceedu sameeyeen daqiiqaddii 24aad oo goolka hore ee Lyon uu ku dhaliyey Maxwel Cornet.
Qaybtii labaad ayuu Guardiola keenay Riyad Mahrez, waxaana uu wax badan ka beddelay ciyaarta kooxdiisa, iyagoo goolka barbarrahana uu u dhaliyey Kevin de Bruyen.
Raheem Sterling ayaa fursado dahabi ah ka khasaariyey naadigiisa, waxaana ugu dambayntii ciyaarta oo ay 15 daqiiqadood oo kali ahi ka hadhsan tahay dhamaadkeeda soo galay weeraryahanka Mossa Dembele oo afar daqiiqadood markii uu ku jiray goolka labaad u dhaliyey Lyon, haddana toddoba daqiiqadood kaddib ku daray gool kale oo rajo la’aan ka dhigay Man City.
Rio Ferdinand oo hore usii sheegay in Pep Guardiola uu noqon doono tababare fashilmay haddii uu ku guuleysan waayo Champions League ayaa markii ay ciyaartu dhamaatay eedda guul-darrada u xambaariyey tababaraha reer Spain, waxaanu yidhi: “Hore ayaynu uga sii hadalnay ciyaarta, City waxay ahayd midda la filayay inay badiso marka loo eego heerka ciyaartoygeeda, laakiin maanta (xalay) waxba may soo bandhigin.
“Waxay ila tahay in ciyaartoydii ugu hal-abuurka badnaa ay bannaanka fadhiyeen, markii uu yimid Mahrez na waynu aragnay in kooxdu u muuqatay mid wanaagsan, waxaana laga yaabaa inay u baahnaayeen hal ciyaartoy oo kale ee abuure ah. Waxa shaxda koowaadna uu kusoo bilaabay ciyaartoy kaliya oo ka mid ah saddexdii ciyaartoy ee sida caadiga ah fursad abuureyaasha ahaa.”
Rio Ferdinand waxa kale oo uu xusay inay qaladaad iyo fursado khasaarin sameeyeen Raheem Sterling iyo goolhaye Ederson.